Danger zone: သူငယ်ချင်းသို့ ပြန်စာ(၆)
ဒီရက်ပိုင်း သတင်းတွေ ဖတ်ရတာတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေချည်းပါလား သူငယ်ချင်းရေ . . . ။ သမ္မတအသစ်စက်စက်နဲ့ အတူ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၁၈ ယောက် ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း ၀န်ကြီး ၁၄ယောက် ပါဝင်တဲ့ အစိုးရသစ်ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေဟာ ဘယ်လိုများရှိမလဲ၊ လွှတ်တော်သစ်ကြီးတွေကနေ ပြည်သူတွေ အကျိုးရှိမယ့် ဘယ်လိုဥပဒေတွေများ ပြဒါန်းမလဲ။ ပြီးတော့ ငါတို့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုများ ပါဝင်နိုင်မလဲ ဆိုတာတွေအတွက် အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားနေမိတယ်။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ အညီ ငါတို့ ဘာတွေများ ပြောင်းလဲကြမှာလဲ ဆိုတာကို အချက်(၅၀) လောက်ရုတ်တရက် စဉ်းစားမိတာလေး မင်းကို ပြောပြချင်တယ်။ မင်းကတော့ အစိုးရသစ်တောင်မတက်သေးဘူး တောင်းဆိုချက်တွေ များလှချည်လားထင်မယ်။ တောင်းဆိုတယ်ဆိုတာထက်ကို ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေကို ချရေးလိုက်တော့ ဘယ်အရာတွေ လိုအပ်နေလည်း ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတာတွေ ထွက်လာတာပေါ့။ ပြီးတော့ ဟိုအာဏာကို လက်မလွှတ်ချင်သေးတဲ့ လူတစ်စုကိုလည်း နိုင်ငံရဲ့ အနေအထားကို သိစေချင်တယ်။ နောက်ထပ် ငါတို့ နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့လည်း အရွေ့မှာ ဘာတွေကို မျှော်လင့်ထားရမလဲဆိုတာကို သိကြရအောင် ရေးလိုက်တယ်။
၁ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရန်
၃ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရန်
၄ အဂတိတရား ကင်းစင်ရန်
၅ ဖဒရယ်ပြည်ထောင်စု ပေါ်ပေါက်ရန်
၆ နိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အအုံများ တိုးတက်ရန်
၇ အိမ်ခြံမြေ ဈေးနှုန်းများထိန်းညှိရန်
၉ နိုင်ငံသားတိုင်း အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်နေနိုင်ရန်
၁၀ ရေ၊ မီး အမှိုက်စွန့်ပစ်စနစ်ကောင်းမွန်လာစေရန်
၁၁ လမ်းကျပ်နေမှုများ ဖြေရှင်းရန်
၁၂ အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး တိုးတက်ရန်
၁၃ လမ်းဘေး ဈေးသည်ပြဿနာဖြေရှင်းရန်
၁၄ ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း ပညာပေးရန်
၁၅ အခွန်အခများ သေချာစွာ ကောက်ယူရန်
၁၆ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာကို စနစ်တကျသုံးစွဲရန်
၁၇ ဘဏ်လုပ်ငန်းများ အဆင့်မြှင့်ရန်
၁၈ အသေးစားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများ တိုးတက်ရန်
၂၀ ပညာရေးစနစ် ပြောင်းလဲရန်
၂၁ အိုင်တီနှင့် စက်မှုနည်းပညာတိုးတက်ရန်
၂၂ ပြည်သူတရပ်လုံး ကျန်းမာရေးစနစ်တိုးတက်ရန်
၂၃ နယ်စပ်ရေးရာနဲ့ လူဝင်မှုပြဿနာအဖြေရှာရန်
၂၄ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်
၂၅ မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတများ စည်းစနစ်တကျ တူးဖော်ရန်
၂၆ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောပြုန်းတီးမှု ကာကွယ်ရန်
၂၇ သားရဲတိရစ္ဆာန် စောင့်ရှောက်ရန်
၂၉ လုပ်ငန်းခွင် အန္တရာယ်ကင်းစင်ရန်
၃၀ အလုပ်အကိုင်နှင့် ပညာအရည်အချင်း ထပ်တူညီရန်
၃၁ အခြေခံလုပ်သား လစာ သတ်မှတ်ရန်
၃၂ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး တိုးတက်ရန်
၃၃ လူငယ်အခွင့်အရေး တိုးတက်ရန်
၃၄ ဘာသာအချင်းချင်း ချစ်ကြည်စွာနေထိုင်နိုင်ရန်
၃၅ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် တန်းတူညီရေးရှိရန်
၃၆ အရပ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းလာစေရန်
၃၇ အလုပ်သမား သမဂ္ဂ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အားပေးရန်
၃၈ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှုများ ထိန်းချုပ်ရန်
၄၀ လောင်းကစားမှုများ တိုက်ဖျက်ရန်
၄၁ ပျက်ပြားနေသော စိတ်ဓါတ်များ ပြုပြင်ရန်
၄၂ အချင်းချင်း ယုံကြည်မှု ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်
၄၃ အစိုးရလုပ်ငန်းများ စည်းစနစ်ကျရန်
၄၄ တပ်မတော်အပါအ၀င် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ အရေးအသွေးမြှင့်ရန်
၄၅ လယ်ယာစိုက်ပျိူးရေး အဆင့်မြှင့်ရန်
၄၆ မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနဲ့ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရန်
၄၇ တိုင်းရင်းသား၊ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုများ ထိန်းသိမ်းရန်
၄၈ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ အဆင့်မြှင့်ရန်
၄၉ မီဒီယာကျင့်ဝတ်များ ပိုမွန်ကောင်းမွန်လာစေရန်
၅၀ ပညာပေးဖျော်ဖြေမှု(Edutainment)များ ကောင်းမွန်စေရန်
ဖတ်ရတဲ့ မင်းတော့မသိဘူး ရေးရတဲ့ ငါ့မှာတော့ရေးရင်းနဲ့တောင် ရင်မောလာတယ်။ တကယ်တမ်း ဒီ့ထက်ကို သေသေချာချာစေ့စေ့ပေါက်ပေါက်လိုက်တွေးရင် နောက်ထပ်လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိနေနိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါနဲ့များ ဘာများထပ်ပြောင်းလဲစရာ ရှိသေးလဲ ထပ်ပြောင်းစရာ ကွန်မြူနစ်ပဲ ရှိတော့တယ်ဆိုပြီး ပြောထွက်တာ အံ့သြမဆုံးဘူး။ ငါရေးပြသွားတဲ့ အချက်တွေထဲက အကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ရင်တောင် အပေါ်ဆုံးအချက်တွေကို လုပ်နိုင်တာနဲ့ နိုင်ငံဟာ အများကြီးတိုးတက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ မင်းလည်း ခန့်မှန်းမိမှာပါ။ NLD က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ငါ ဒါတွေ ရေးနေတယ်ဆိုပြီး ပြောဖြစ်တော့ ပြောင်းလဲဖို့ လိုတာ အချက် ၁၀၀ တောင် မကဘူးလို့ သူက ပြောတဲ့ အတွက် သူတို့ စိတ်ထဲမှာ အပြောင်းအလဲတစ်ခုအတွက် အများကြီးပြင်ဆင်ထားလိမ့်မယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာမလိုဘူးထင်တယ် သူငယ်ချင်းရေ . . . ။
နောက်သုံးရက်ဆို အစိုးရသစ်ကြီးဟာ ရက်၁၀၀ စီမံကိန်း၊ ရေတို ရေရှည် စီမံကိန်းတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို မောင်းနှင်တော့မယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အစိုးရသစ်အတွက် အရင်အဆက်ဆက်အစိုးရတွေ လုပ်ချင်ရာလုပ်ခဲ့တဲ့ အမှိုက်ပုံကြီးကို အရင်ဆုံး ရှင်းတာနဲ့တင် နှစ်တွေအချိန်တွေ အများကြီးအရင်ပေးရဦးမှာပါ။ မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာမယ့် လွှတ်တော်သုံးထပ်ကွမ်းအနိုင်ရအမတ် ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကတော့ “NLD အစိုးရဖွဲ့နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့တာ ၂၅နှစ်၊ NLD ထဲမှာ အကုန်လုံးက ခြောက်ပစ်ကင်းသဲလဲစင်မဟုတ်ဘူး။ တချို့တလေ မှားတာနဲ့ NLD မကောင်းဘူးဆိုတာမျိုးကို မမြင်ပါနဲ့ ဘယ်လောကမဆို အပြစ်အနာအဆာလေးတွေ ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် NLD က ပြည်သူကို ဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူး။ NLD က ပြည်သူကို ဘယ်တော့မှ ကျောမခိုင်းဘူး။ NLD ဟာ ပြည်သူကို ဘယ်တော့မှ မျက်ကွယ်မပြုဘူး။ ပြည်သူ့အကျိုးကိုလုပ်မယ် . . . . . ။ ပြည်သူကလည်း ကျွန်တော်တို့ကို ထိန်းကျောင်းပါ၊ ပဲ့ပြင်ပါ။ NLD လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လုပ်ငန်းဖြစ်ဖြစ် အဓိကနိုင်ငံရေးမှာ ပြည်သူမပါပဲနဲ့ မအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ NLD လုပ်တာတွေက ပြည်သူအတွက်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ ပြည်သူတွေ ၀ိုင်းပြီး ပါဝင်ပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ” ဆိုပြီး ကမာရွတ်မီဒီယာနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ထည့်ပြောသွားတယ်။
အဲဒါကြောင့် ငါကလည်း ပြည်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထိန်းကျောင်းဖို့ ပဲ့ပြင်ဖို့၊ NLD အောင်မြင်တယ်ဆိုရင် အသိအမှတ်ပြုဖို့၊ ပြီးတော့ ပြည်သူမပါပဲ မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ တတ်နိုင်တဲ့ ဖက်ကနေ ဒီစာရင်းလေး ပြုစုထားတယ်ပေါ့ကွာ . . . ။ ဒီစာရင်းဟာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်စီအတွက် ကိုယ့်ကို အုပ်ချုပ်မယ့် အစိုးရကို တိုင်းတာဖို့ ပေတံဆိုလည်း မမှားသလို မင်းတို့ ငါတို့လို ဘလော့ခ်ကာတွေ အတွက်တော့ နောက်ပိုင်း ရေးစရာတွေအတွက် Checklist တစ်ခုဆိုရင်လည်း မှားမယ်မထင်ပါဘူးကွာ။ ငါလည်း အရွေ့တစ်ခုမှာ တတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေ ပါဝင်ဖို့အတွက် စာတွေ ပိုဖတ်၊ စာတွေ ပိုရေးနိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး Facebook Page တစ်ခု လုပ်ထားတယ်ကွာ။ မင်း မအားတဲ့ ကြားကနေ ဖတ်ဖို့သာ ပြင်ထားပေတော့။
Posted by Hololu Cthu at 9:22 AM
မလေပြေက ရေးဖို့အတွက် တက်သွားတော့လည်း ရေးပေးရတာပေါ့။ ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းက ဒေါသအရမ်းကြီးပါတယ်။ ကြီးတာကမှ ဒေါသကြီးတာလား ဒေါသသေးတာလား မသိတတ်ခ...
သူငယ်ချင်းသို့ ပြန်စာ(၆) ဒီရက်ပိုင်း သတင်းတွေ ဖတ်ရတာတော့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာတွေချည်းပါလား သူငယ်ချင်းရေ . . . ။ သမ္မတအသစ်စက်စက်နဲ့ အ...
“တူ တူ တူ” "Welcome to Verizon Mobile Service, For English Press 1" "Verizon မိုဘိုင်း ဆားဗစ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်, မြန်မာဘာသာ...
Zin Ko Latt. Powered by Blogger.